နေလင်းအောင်: ပန်းပွင့်နှင့် ပုလဲ
တစ်နေ့မှာ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အရောင်အဆင်းနဲ့ အလွန်လှပပြီး မွေးရနံ့သင်းပျံ့တဲ့ ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ဟာ သူလို ဂုဏ်သတ္တိတွေမရှိဘဲ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်မှာ နေထိုင်နေရတဲ့ ပုလဲလေးတစ်ပွင့်နဲ့ တွေ့ဆုံမိပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးဟာ အချင်းချင်း ခင်မင်သိကျွမ်းလာကြပါတယ်။
ပန်းပွင့်လေးက ပြောပါတယ်။ “ကျွန်မတို့မိသားစုဟာ အလွန်ကြီးပါတယ်။ နှင်းဆီပန်းတွေနဲ့ ဒေစီယာပန်းတွေဟာ ကျွန်မရဲ့ မိသားစုဝင်တွေပေါ့ရှင်။ ပြီးတော့ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် များပြားလွန်းလှတဲ့ အခြားမျိုးကွဲတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ပန်းအသီးသီးမှာ ထူးခြားတဲ့ ရနံ့ရှိနေသလို အလှအပလည်း ရှိနေပါတယ်။” ပန်းပွင့်လေးဟာ ရုတ်တရက် ထိခိုက်နာကျင်မှု အရိပ်အယောင် ပေါ်လာပါတယ်။
“ရှင်ရဲ့ အပြောအဆိုမှာ ဝမ်းနည်းစရာ တစ်ခုမှမပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားရတာလဲ။”လို့ ပုလဲလေးက မေးလိုက်ပါတယ်။
“လူတွေက ကျွန်မတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားပြီး အရှက်ရအောင် လုပ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်မတို့ အကျိုးအတွက် မဟုတ်ဘဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရနံ့နဲ့ လှပတဲ့ အသွင်အပြင်တွေကို ခံစားဖို့အတွက်သာ စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့မှာ အဖိုးအထိုက်တန်ဆုံး ဂုဏ်သတ္တိတွေဖြစ်တဲ့ လှပမှုတွေ၊ ရနံ့တွေ မရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာတော့ သူတို့က ကျွန်မတို့ကို လမ်းပေါ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အမှိုက်ခြင်းထဲ ဖြစ်ဖြစ် စွန့်ပစ်လိုက်ကြတယ်လေ။”
ပန်းပွင့်လေးက သက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် ပုလဲလေးကို ပြောလိုက်ပြန်တယ်။ “ရှင့်ရဲ့ ဘဝအကြောင်း ပြောပြပါလား။ ရှင့်ကို ပင်လယ်အောက်ခြေမှာ မြှပ်နှံထားတဲ့အတွက် ရှင် ဘယ်လိုနေရသလဲ။ ဘယ်လိုတွေ ခံစားရသလဲ။”
ပုလဲလေးက ပန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ “ကျွန်မမှာ ရှင်လို ထူးခြားတဲ့ အရောင်အဆင်းနဲ့ ရနံ့မရှိပေမယ့်လည်း လူတွေက ကျွန်မကို အဖိုးတန်တယ်လို့ ထင်မြင်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်မကို ရယူဖို့ အတွက် မဖြစ်နိုင်လောက်တာတွေတောင် ပြုလုပ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်မကို ရှာဖွေဖို့အတွက် ခရီးအဝေးကြီး သွားရတယ်။ ပြီးတော့ ပင်လယ်ထဲ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ငုပ်လျှိုးရတယ်။ ကျွန်မဟာ အဝေးကြီးမှာ ရောက်နေလေ၊ ပိုပြီးလှပ တောက်ပလေပဲဆိုတာ သိရရင် ရှင် အံ့အားသင့်မိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် သူတို့စိတ်ထဲမှာ ကျွန်မရဲ့တန်ဖိုး မြင့်တက်ရခြင်းပါပဲ။ ကျွန်မဟာ ထူထဲတဲ့ အခွံတစ်ခုနဲ့ မှောင်မိုက်တဲ့ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်မှာ တစ်ဦးတည်း နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖျက်လိုဖျက်စီးလုပ်တတ်တဲ့၊ အကျီစားသန်တဲ့ လက်တွေကနေ ဝေးဝေးရောက်ပြီး လုံခြုံတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ နေထိုင်ရတဲ့အတွက် ကျွန်မကတော့ ပျော်ရွှင်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေကတော့ ကျွန်မကို အလွန်အမင်း တန်ဖိုးထားနေတုန်းပဲလေ။”
ပန်းပွင့်လေးနဲ့ ပုလဲလေးဟာ ဘာကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာ သင် သိပါသလား။
သင် တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ပန်းပွင့်လေးဟာ အလှအပတွေကို လှစ်ဟပြတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့တူပါတယ်။ ပုလဲလေးကတော့ အလှအပတွေကို ဖုံးကွယ်ထားတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ တူပါတယ်။
ပန်းပွင့်လေးတွေဟာ လိုအပ်ချိန်မှာ အသုံးပြုခံရပေမယ့် မလိုအပ်တော့တဲ့အချိန်( အသုံးပြုပြီးတဲ့အချိန်)မှာတော့ အမှိုက်ခြင်းထဲ စွန့်ပစ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ပုလဲလေးတွေကိုတော့ နေရာတိုင်းမှာ အလွန်အမင်း တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
ဒီတော့ လုံမငယ်တို့လည်း ပန်းပွင့်ဖြစ်ချင်တာလား၊ ပုလဲပွင့်ဖြစ်ချင်တာလား စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။
Ref;Flower andaPearl by Unknown Author
Flower andaPearl by Unknown Author
One day,abrilliantly beautiful and fragrant flower
with attractive colors metapearl that lives far in the bottom
of the sea and has none of these characteristics.
The flower said: "Our family is large; roses and daisies are
members of the family. And there are many other species that
are various and countless; each hasadistinctive scent, appearance etc."
"Nothing accounts for sorrow in your talk;
so why are depressed?"
"Human beings deal with us carelessly; they slight us.
They don't grow us for our sake but to get pleasure
from our fragrance and beautiful appearance.
They throw us on the street or in the garbage can
after we are dispossessed of the most valuable properties;
brilliance and fragrance."
The flower sighed. And then the flower said to the pearl:
"Speak to me about your life! How do you live?
How do you feel it? You are buried in the bottom of the sea."
The pearl answered: "Although I have none of your
distinctive colors and sweet scents, humans think I am precious.
They do the impossible to procure me. They go on long journeys,
dive deep in the seas searching for me. You might be
astounded to know that the further I lay,
the more beautiful and brilliant I become. That's what
upraises my value in their thought. I live inathick shell
isolated in the dark seas. However, I'm happy and proud to be
inasafe zone far from wanton and mischievous hands and still
the humans consider me highly valuable."
You will find that: The flower is the unveiled woman
(who shows her charms) and the pearl is the veiled woman
(who conceals her beauties).
So decide do you want to be likeaflower or Pearl,
Flower which is used when needed and thrown away in Garbage
after it is used or Pearl which is highly valuable and respected
Posted by နေလင်းအောင် at 8:50 PM